U-Neil Gaiman unika i-sneak Peak yeNetflix yoHlengahlengiso oluzayo lwe 'Sandman'
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	U-Neil Gaiman unika i-sneak Peak yeNetflix yoHlengahlengiso oluzayo lwe 'The Sandman'
U-Neil Gaiman unika i-sneak Peak yeNetflix yoHlengahlengiso oluzayo lwe 'The Sandman'
by UTrey Hilburn III Juni 8, 2021
by UTrey Hilburn III Juni 8, 2021 1,757 imbono
Ndisakukholelwa kancinci USandman, omnye wemisebenzi emikhulu yexesha lethu, uba ngu Netflix uthotho. Kwinto entsha ngasemva kwemiboniso bhanyabhanya uMyili uNeil Gaiman uhamba ngeeseti ezimangalisayo kwaye ujonga ezinye zeepropathi ezintle. Kuyathakazelisa ukubona uGaiman engathethi kububanzi behlabathi obudityaniswe liqela loyilo. Ukujonga ngokufutshane kwiTom Sturdige kupholile kakhulu. La mathambo kaMorpheus esidleleni kunye neenwele ezimnyama zamahlungulu zijongeka zilungile.
Isishwankathelo se I-Sandman ihamba ngolu hlobo:
Umxube otyebileyo wentsomi yanamhlanje kunye nefantasy emnyama apho iintsomi zangoku, idrama yezembali kunye nelivo zidibene ngaphandle komthungo, Sandman ulandela abantu kunye neendawo ezichaphazelwe nguMorpheus, uKumkani wamaPhupha, njengoko elungisa iziphoso-kunye neempazamo zabantu azenzileyo ngexesha lobukho bakhe obukhulu.
Esi sisithembiso esikhulu seyona mpumelelo inkulu kaGaiman. Kumnandi ukubona abalandeli bezinto zokusebenza besebenza kwiprojekthi. I-Crystal emnyama uthotho olwafika kwiNetflix lwalumnandi kuba iqela lemveliso lalizithanda izinto. Ndicinga ukuba uSandman uya kulandela ngokufanelekileyo neqela elithanda kakhulu loo nto.
Asinakulinda ukujonga i-Gaiman's I-Sandman xa ekugqibeleni ikhutshwa. Kuza kubakho ukulinda okunzima. Nicinga ntoni nina? Sazise kwicandelo lamagqabaza.
URob Zombie uza kuthatha i-Munsters adaptation njengeprojekthi yakhe elandelayo. Funda ngakumbi apha.